Gịnị bụ Ọrịa Othello | Bezzia
Gịnị bụ Ọrịa Othello?
Ọrịa Othello na-ezo aka na njirimara dị na egwuri egwu nke onye edemede England bụ Shakespeare. Ihe ejiri mara agwa a bụ nke ekworo na-enweghị ọgwụgwọ, na-eme ka ọ na-eche echiche oge niile banyere ekwesịghị ntụkwasị obi nwunye ya. Dị ka a ga-atụ anya ya, onye na-arịa ụdị ọrịa a na-eme ka mmekọrịta ha ghara ịbụ nke mmebi na ibikọ ọnụ n’etiti mmadụ abụọ ịbụ nke ekwesighi.
Nke a bụ ezigbo nsogbu nye di na nwunye ọ bụla dịka mmekọrịta ahụ na-egbu egbu. N’isiokwu na-esonụ, anyị ga-atụlekwu banyere ụdị ọrịa a na otú o si emetụta di na nwunye ahụ n’ụzọ na-adịghị mma.
1 Gịnị bụ ọrịa Othello n'ihi
2 Mgbaàmà nke ọrịa Othello
Gịnị bụ ọrịa Othello n'ihi
O doro anya na onye na-arịa ọrịa Othello nwere nsogbu ụfọdụ na ọkwa ọgụgụ isi. Na mgbakwunye, enwere ọtụtụ ihe kpatara ma ọ bụ ihe kpatara ị ga - eji nwee ụdị ekworo: enweghị nkwanye ùgwù onwe onye, ịdabere n'ụzọ dị ukwuu na onye òtù ọlụlụ na egwu gabigara ókè nke ịbụ onye onye a hụrụ n'anya hapụrụ ma hapụ naanị ya.
Onye nwere ụdị ekworo a nwekwara ike ịrịa ọtụtụ nsogbu dị iche iche dika enwere ike idi nsogbu nke ike ike ma obu nsogbu di iche iche. N'aka nke ọzọ, a na-echekwa na ekworo dị otú ahụ nwere ike ibute site n'i consumptionụbiga ihe ọ asụ andụ na-emerụ ahụ ahụ dịka mmanya ma ọ bụ ọgwụ ike.
Mgbaàmà nke ọrịa Othello
Dịka anyị kwurula na mbụ, onye na-arịa ọrịa a bụ ekworo na-adịghị mma nke onye ọlụlụ ya. Typedị ekworo a ga-enwe àgwà atọ dị iche iche:
Enweghị ezigbo ihe kpatara ya ihe kpatara ekworo dị otú ahụ kwesịrị iji mepụta.
Suspicionba ụba na nrutuaka nke onye òtù ọlụlụ.
Mmeghachi omume bụ ihe ezi uche na-adịghị na ya enweghị isi.
Banyere mgbaàmà nke onye ekworo, ihe ndị a kwesịrị ịkọwapụta:
Na-achịkwa oke gị. Ọ na-eche na ọ bụ ekwesịghị ntụkwasị obi n'oge niile na nke a na-eme ka ọ na-eche nche mgbe niile.
Respect naghị asọpụrụ nzuzo nke onye gị na ya. Ikwesiri ima oge obula ihe onye ozo gi na eme. Nke a nwere mmetụta na-adịghị mma na mmekọrịta mmekọrịta ha.
Mkparị na iti mkpu na-apụta ìhè. Ihe a niile na-eduga na ime ihe ike nke nwere ike ịbụ nke anụ ahụ ma ọ bụ nke uche.
Enweghị ohere maka mmetụta uche ziri ezi ma ọ bụ mmetụta. Obu ihe kwesiri onye ekworo iwe iwe we iwe rue ubochi dum. Obi anaghị adị ya ụtọ na onye òtù ọlụlụ ya, ebe ọ bụ na ọ dabere na mmekọrịta dabere.
Na nkenke, ọ dị mkpa ịgwọ ụdị ọrịa a ozugbo enwere ike. Onye na-ekwo ekwo chọrọ enyemaka onye ọkachamara, iji nyere ya aka ịhụ na gị na onye ọzọ agaghị enwe mmekọrịta n'ụzọ na-egbu egbu. Ọ bụrụ na onye ahụ ekweghị ka e mesoo ya ma ọ bụ na ọ gaghị enwe ike imeri nsogbu nke anyaụfụ, mmekọrịta ahụ ga-emebi. Mmekọrịta kwesịrị ịdabere na nkwanye ùgwù zuru oke na ntụkwasị obi nke mmadụ abụọ. Enweghi ike ikwe ka ekworo na-enwe mmekọrịta na mmekọrịta, n'ihi na ọ ga-emesị mebie ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Psychology na di na nwunye » Psychology » Gịnị bụ Ọrịa Othello?
You na-arịa blancorexia? Ọchịchọ inwe ezé ọcha
6 nkpuchi ntutu maka oge opupu ihe ubi a